IMountain Inn Mini Chalet Walchsee 12
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguEva
Amakhaya akho amancinci eeholide kwisitayile se-alpine hut eKalvarienberg eWalchsee / Tyrol. Ubuntu kunye nenkululeko yendlu yakho elizweni, uxolo kunye nokuphumla, kunye nokuba kufutshane nendawo kunye nechibi.
Indawo yethu encinci yeeholide inee chalets ezininzi zothando kunye ne chalets zosapho ezinamagumbi ongezelelweyo ukuya kuthi ga kwi-8 yabantu. Ezi zindlu ziphakathi kwe-25m² kunye ne-80m² yezindlu ezinkulu zamaplanga, eziqinisekisa ukuba umoya wakho upholile kwaye uphumle!
IMountain Inn Mini Chalet inendawo yokuhlala ebanzi / yokutyela kunye neyokulala emalunga ne-21m². Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngeshawa ... Kwaye ikhitshi inayo yonke into oyifunayo "ukuzilungiselela"!
Ngathi uya kufumana i-cosiness ye-alpine hut edityaniswe nobunewunewu bale mihla! KwiMountain Inn Mini kwindawo encinci ngexabiso elifikelelekayo!
Izitshixo zinikezelwa ekufikeni! Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nendlela yokufika apho, ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha kwinombolo yefowuni enikwe kwi-imeyile ...